Online Khabar Patrika || समाज
यस्ता गुण भएका युवती हुन्छन् भाग्यमानी
काठमाडौं । हाम्रो समाजमा अहिले पनि शास्त्रीय मान्यतालाई सत्य मानिन्छ । शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरेको पाइन्छ । समुद्रशास्त्रमा शारीरिक अंगको बनावट तथा रुप रेखा हेरेर कुनै पनि ब्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरिएको छ । जसकै आधारमा कुनै व्यक्तिको भविश्यबारे पनि बताइन्छ । शिव पुराणमा कुमार कार्तिकेयले मानिसमा यस्ता गुण बताएका छन् जुन गुण हुने ब्यक्ति सौभाग्यशाली, भाग्यमानी र शुभ फल प्राप्त गर्छन्...
के हो गोत्र ? किन सम्भव हुदैन सगोत्री बिवाह ?
काठमाडौं । नेपालमा बहुजाति बहुभाषी र बहुधार्मिक सम्प्रदायहरु छन् । हामीकहाँ कोही मामा चेला फुपु चेलीसम्म बिवाह गर्ने जाति छन् त कोही दाजुको मृत्युपश्चात भाउजुलाई दुलही बनाएर राख्ने समेत संस्कार र परम्परा पाइन्छ । तर, हिन्दु ब्राम्हणहरुमा भने एउटै कुल अर्थात एउटै बंशमा विवाह गर्ने काम वर्जित नै छ । उनीहरुमा एउटै गोत्र प्रवरबाहेक एउटै थरमा समेत बिहेवारी हुदैन । तर आधुनिक पुस्तामा भने गोत्रको ज्ञान धेरै कमलाई मात्र भएको...
वीरगञ्ज । आर्थिक नगरी वीरगञ्जको माईस्थानस्थित विधापीठ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोद मेहताको सरुवा गरेपछि विद्यार्थीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीविरुद्ध आज बिहानैदेखि घण्टाघरमा नारा जुलुस गर्न थालेपछि घण्टाघर तनावग्रस्त भएको छ । महानगरपालिकाले शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत प्रअ मेहताको सरुवा सुखचैना माविमा गरेपछि विद्यार्थीले आइतबारदेखि नै प्रमुख सरावगीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएका छन् । प्रअ मेहताले शैक्षिक अवस्था तहसनहस पारेको, शिक्षालाई अङ्ग्रेजी माध्यम बनाएर अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुल्दै आएको, विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाएको...
सयौं बिघा नेपाली जमिन भारतीय कब्जामा
टीकापुर । कैलालीको दक्षिणी सीमावर्ती भजनी नगरपालिका–३ कुसुमघाटमा भारतीय पक्षले सीमा मिचेको छ । भारतीय पक्षले नेपाल–भारतको सीमा स्तम्भ नेपालतर्फ सारेर नेपालीको खेतीयोग्य जमिन कब्जा गरेको हो । स्थानीयका अनुसार सय बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन भारतीय पक्षले कब्जा गरी खेती गर्दै आएका छन् । केही समयअघि सीमा विवाद अन्त्य गर्न आएको दुई देशका टोलीलाई स्थानीयले सीमा स्तम्भ पुरानै स्थानमा राख्न माग गरेका थिए । दुई देशको सिमाना छुट्याउन आएको...
मनाङमा अधिक चिसो, बग्दाबग्दैको खोलाको पानी जम्यो
लमजुङ । जंगलमा आगलागी हेर्न शनिबार बिहान हिँडेका सशस्त्र प्रहरी ३२ नम्बर गुल्म चामेका डीएसपी नीलकमल आचार्य तलेखु नजिकै अचानक रोकिए । उनले देखे– मस्र्याङ्दी नदी पारिपट्टिको ठाडो खोलाको झरनाबाट बग्ने पानी जमेको । मस्याङदी किनारसम्म आँखा डुलाए, त्यहाँ पनि पानी जमेकै थियो । उनीसँगै अन्य प्रहरले समेत बग्दाबग्दै जमेको छहरा र पानीलाई नजिकबाट नियाले । ‘बग्दाबग्दैको पानी जमेको पहिलो पटक देखें,’ उनले भने, ‘भरिएको पानी, बाटोको पानी तथा शीत...
काठमाडौं । हाम्रो समाजमा अहिले पनि शास्त्रीय मान्यतालाई सत्य मानिन्छ । शास्त्रमा मानवीय जीवनका...
रोहित शेट्टीको फिल्ममा काम माग्न साराले गरेकी थिइन् यस्ता हर्कत
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री साराले हात जोडेर फिल्ममा काम मागेको बताएकी छिन् । उनले...
बोल्टले क्रिकेट इतिहासमा बनाए दुर्लभ रेकर्ड
एजेन्सी । न्युजिल्याण्डका तीव्र गतिका बलर ट्रेन्ट बोल्टले श्रीलंकाबिरुद्धको दोस्रो टेस्टको पहिलो पारीमा ६...
बालाजु वाइपासमा टिप्पर पल्टिँएपछि..
काठमाडौं । बालाजु वाइपासमा टिप्पर पल्टिँदा सडकपेटीमा चिया बेचिरहेका दलबहादुर बिसुंखेको ज्यान गएको छ...
यो हप्ता विदेशी मुद्राको भाउमा उतारचढाव: आज कति छ भाउ
काठमाडौं । अघिल्लो हप्ताजस्तै यो हप्ता पनि डलरलगायत विदेशी मुद्राको भाउमा उतारचढाव आएको छ...
Online Khabar Patrika
अनलाईन खबर पत्रिका प्रा. ली.
Website : www.onlinekhabarpatrika.com